» नेकपाको कौरव प्रवृत्ति अन्त्य गर्छौं : नेतृ पन्त
काठमाडौं, ५ कात्तिक
नेपालमा फेरी कोरेना (कोभिड १९) भाईरसको सँक्रमण ह्वात्तै बढेको छ । आज बुधबार मात्र नेपालमा ५ हजार ७४३ जनामा कोरोना भाईरस सँक्रमण देखिएको छ । कोरोनाबाट पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप २८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा देशभरका प्रयोगशालामा २० हजार ११८ जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा ५ हजार ७४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यस्तै पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा ३ हजार १०७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यो अहिलेसम्मकै काठमाडौंको उच्च सँख्या हो । जसमध्य काठमाडौंमा २ हजार ३९१ जना, भक्तपुरमा १७३ जना र ललितपुरमा ५४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ ।
यो सँगै नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित १ लाख ४४ हजार ८७२ पुगेको पनि डा. गौतमले बताए । उनका अनुसार यतीबेला ४४ हजार ४७६ जना विभिन्न आइईसोलेसन सेन्टरमा उपचारको अबस्थामा छन् । देशभरका क्वारेन्टिनमा ४ हजार ६५ जना रहेको पनि डा. गौतमले बताए ।
यस्तै डा. गौतमका अनुसार आज २ हजार ९९६ जना कोरोना भाईरस मुक्त भएका छन् । यो सँगै हालसम्म ९९ हजार ६०५ जना कोरोना मुक्त भएको पनि डा. गौतमले बताए ।
यसैगरी नेपालमा पछिल्लो् २४ घन्टामा कोरोना भाइरसको सँक्रमणबाट थप २६ जनाको निधन भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट निधन हुनेको सँख्या ७९१ जना पुगेको छ ।
नेकपाको कौरव प्रवृत्ति अन्त्य गर्छौं : नेतृ पन्त
गीतकार रविन पियाको सुन हैन तिम्रो माया सार्बजनिक
सुधिर र श्रृष्टीको अभिनयमा गुणराज श्रेष्ठ र अस्मिता अधिकारीको ‘दोबाटोमा चौतारी’ सार्वजनिक
गायक जोन शाहीको ‘आधा लास’ सार्वजनिक (भिडियो)
सृष्टि खड्काको अभिनयमा अस्मिता अधिकारीको ‘तिमी छौ यो मन भरि’ सार्वजनिक
१६ देशलाई पछि पार्दै नेपालकी ७ वर्षिया प्रिन्शा खड्काले जितिन ‘गोल्डेन क्विन अफ २०२०’